तनावमा हुनुहुन्छ ? सेवन गर्नुहोस यी ड्रग्स, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
तनावमा हुनुहुन्छ ? सेवन गर्नुहोस यी ड्रग्स
सायद त्यो समयमा अन्य ‘स्मार्ट ड्रग्स्’ को विकास भएको थिएन । मानिसहरु फ्रेस हुनको लागि कफी, चिया वा यस्तै केही पेय पदार्थ पिउँथे । यद्दपी अल्कोहलिक पदार्थको भने छुट्टै कथा छ । त्यसवेलाका केही शताब्दीहरुमा कयौं कम्पनीहरुले आफ्ना कामदारहरुलाई दिक्क लागेका वेला ओल्ड कफिन खान प्रेरित गर्थे भनिन्छ । तर आज त्यस्तो छैन । किनकी थुप्रै यस्ता ‘स्मार्ट ड्रग्स्ह’ रु पत्ता लागिसकेका छन् जसले दिमागको विकासका लागि निकै भुमिका खेल्छ भन्ने वैज्ञानिकहरुको विश्वास छ । किनकी पुष्टि समेत भएको छ नै त्यस्तै ।
रोमानियाका वैज्ञानिक कर्नेलिय गियगेले ‘स्मार्ट ड्रग’ सन् १९६० को दशकमा पत्ता लगाएका हुन् । यी वैज्ञानिक त्यतिवेला एउटा यस्तो रसायनको खोजीमा थिए जसले मानिसलाई निद्रा लागेको अनुभव दिलाओस् । कयौं महिनाको टेस्टपछि उनले कम्पाउण्ड ६२१५ नामको पदार्थ पत्ता लगाए । यसको साइड इफेक्ट अत्यन्तै कम थियो । यो सुरक्षित पनि थियो तर यसले अपेक्षित काम भने गरेन ।